ऊर्जा मन्त्रालयले ल्यायो हरेक नेपालीका लागि खुसीको खबर ! | suryakhabar.com
Home उर्जा ऊर्जा मन्त्रालयले ल्यायो हरेक नेपालीका लागि खुसीको खबर !
on: २५ बैशाख २०७५, मंगलवार १९:२४ In: उर्जा, समाचारTags: No Comments
काठमाडौँ । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल’ भन्ने नारालाई साकार पार्ने लक्ष्यका साथ २०७५ देखि ८५ सम्मलाई ‘ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक’को रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ ।
ऊर्जा उत्पादनलाई रणनीतिक रुपमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ ऊर्जा दशकको अवधारणा अगाडि सारिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गभित्र सार्वजनिक गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा क्षेत्रको रणनीतिक विकासका लागि सरकारले योजनाबद्ध रुपमा अभियान शुरु गरेको जानकारी दिए ।
विगतमा घोषणा गरिएकै कार्यक्रमका आधारमा मन्त्री पुनले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए ।
मन्त्री पुनले आज सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रअनुसार सबै नेपाली नागरिकलार्ई जलविद्युत् आयोजनाको शेयर उपलब्ध गराउने नीति अगाडि सारिएको छ । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को शेयर धनी’ कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि आर्कषक र नाफामूलक जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र सबै नेपाली नागरिकलाई शेयर वितरण गर्ने योजना ल्याइएको छ ।
त्यसैगरी आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाल–चीन जोड्ने गल्छी–रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिने मन्त्री पुनको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
एउटा सिण्डिकेट अन्त्य भएको भोलीपल्टै नयाँ बसपार्कमा अर्को सिण्डिकेट
२५ बैशाख २०७५, मंगलवार १९:२४